Abafazi kuYilo: Epreli Greiman | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Abafazi kuYilo: Epreli Greiman
U-Epreli Greiman waziwa njenge Umzobi wegraphic owazalelwa eunited States ngonyaka 1948.
Ngenxa yokuthanda nokuzonwabisa, wabonwa njengomnye wabayili bokuqala ukuba ikwazile ukufaka iikhompyuter kunye nezixhobo zedijithali Baza kukwazi ukuphucula umsebenzi wabo, besenza iimvavanyo malunga nesixa esikhulu samathuba abanokubonelela ngawo kunye nokujonga amandla amakhulu ekufuneka bewasetyenzisile kuyilo lwegraphic. UGriman wakwazi ukuphuhlisa kwimisebenzi yakhe isimbo esithile ngaphakathi kwinto kamva eyaziwa njenge Amaza amatshaIsindululo somzobo esaphuke kunye neengcinga zesimbo saseSwitzerland okanye sinokuthathwa njengenyathelo eliya kwinto ethe kratya emva kwale ndlela.
Greiman waqala izifundo zakhe eKansas City Art Institute Ekupheleni kweminyaka engamashumi asixhenxe ezokugqitywa kwiminyaka emibini enzima eKunstgewerbeschule eBasel kunye noWolfgang Weingart owaziwayo.
Ngaloo minyaka, u-Weingart waqala ukubuza imigaqo ethile eyayimkhuthazile Indlela yokuhamba yala maxesha, njengesixhobo esomeleleyo segridi okanye njengokucoceka kwendawo enamacala amabini engenakuchukunyiswa. Ukuba ngumfundi kaWolfgang Weingart kunye noArmin Hoffman kwezi-70s zokuqala, uGreiman uzinikele ekuhloleni isitayile samanye amazwe ngokunzulu, kananjalo nolu lingelo ngokobuqu nguWeingart kwaye isekwe kuphuhliso lobuhle obunokubonakalisa okuncinci kwilifa lala maxesha kwaye lujolise kutshintsho lwasemva kweshishini eluntwini.
Greiman waqala ukusebenza kwiProjekthi yeetaxi zeMyuziyam yoBugcisa beManje eNew York phakathi kwiminyaka engamashumi asixhenxe, ukuyila upapasho kunye nayo nayiphi na into yokwazisa enikiweyo.
Ngo-1976 wafudukela eLos Angeles ukubonelela ngentsebenziswano eCarlifonia Institute of The Art, apho wadibana nomfoti uJayme Odgers, Wayenomdla kulingo lokufota kwaye emva koko ziikhompyuter.
Ngonyaka we-19684, iMacintosh yayingena ngokufihlakeleyo kummandla we uyilo lwentengiso. Ngokubanzi kwaye ubukhulu becala, abayili bebengathandabuzeki okanye sinokuthi sichasene nombono ube nakho ukumilisela izixhobo kulwenziwo loyilo Kwaye le nto, ngandlela thile imele uloyiko lwekamva elithile elingakhuselekanga, apho ukuchukumisa kwesandla kwathathwa ngoomatshini beebhit kunye neebte.
Amabhongo inzondelelo yezixhobo kunye neetekhnoloji Ukususela ebuntwaneni, uGreiman wakhawuleza wazimisela njengovulindlela kwindawo yoyilo lwedijithali. Elinye lamagqabaza enziwe ngaxa lithile "imbonakalo yedijithali iyandonwabisa ngendlela efanayo nentlango”. Olu thando luvela ezinzulwini zobukho bakhe, umdla wakhe wokucinga kunye nokuzibuza okungapheliyo yintoni ebangela ukuba umnqweno wokufuna ukuwuphonononga kunye nokukhuthaza uyilo lwe-avant-garde, oluyibeka kwindawo ephezulu yoyilo oludibeneyo kwiminyaka yokugqibela yenkulungwane yama-XNUMX, esi sisizathu esamkhokelela ekubeni aqhubeke nomsebenzi wakhe wokuyila, yiyo loo nto wamnika imbasa ye-AIGA ngonyaka 1998.
Imele ithuba apho kungekuphela nje umsebenzi wakhe wokuqala ungacaciswa, kodwa ikwanokubuza umbuzo obanzi kancinci malunga nomsebenzi kunye nokusingqongileyo.
Ngaphambi kokuba lo mbuzo uvele, abayili bayaqikelela iifonti kunye nemifanekiso ye-bitmap ayisiyonto nje engafanelekanga, kodwa ingamkelekanga, kodwa emva kokupapashwa kweDesing Quarterly # 133, abaninzi banyanzelwa ukuba bathathele ingqalelo Sebenzisa ikhompyuter kuyilo.
Kwelinye icala, uyilo lweWave eNtsha Iimpembelelo zakhe kwipunk kunye nethiyori yolwimi yangoku. Oku kubhekisa kwindlela yokuchwetheza engafuni ukuguqulwa okungqongqo xa kufikwa kwigridi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abafazi kuYilo: Epreli Greiman
Amagcisa edigital amangalisayo achukumisa umhlaba